Donut County, ciyaar madadaalo u ah qoyska oo dhan | waxaan ka imid mac
Qolka Ignatius | | Ciyaaraha, Mac App Store
Waxaa jira wax ka yar 10 maalmood in kuwa yaryar ay bilaabaan inay ku raaxaystaan mudan fasaxa macalimiinta. Marka loo eego jawiga iyo hawlaha laga qorsheeyay magaaladeena, waxay u badan tahay inay taasi dhacdo aan ku qaadano inta badan maalinta guriga ka maqan ama aan ka tagin, haddii aynaan nasiib u yeelan in aan nasano dhowr maalmood.
Haddii aad bilowday u hel madadaalo kale oo yar yarWaa inaad u fiirsato ciyaarta Donut County, oo ah ciyaar ay kuwa yaryari yeelan doonaan qarax xakamaynaya dalool kaas oo kor u qaada wax kasta oo jidkiisa ku jira.
Degmada Donut waa a ciyaarta halxidhaale iyada oo taarikhda aynu ku jirno dalool dhulka ka baxa oo baaxad weyn. Cinwaankaan, waxaan nafteena ku dhejineynaa kabaha raccoon, BK, oo koontaroolaya godka oo hadafkiisu yahay inuu liqo wax kasta oo la helo, oo ay ku jiraan guryaha asxaabtiisa si uu ugu guuleysto abaalmarino aan macquul ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, bk markuu godkiisa ku dhaco, waxay ka hortimid Mira iyo saaxiibkeed ugu dhow iyo dadka deggan Gobolka Donut. Qof kastaa wuxuu ku dheggan yahay 999 cagood qoto dheer wuxuuna rabaa jawaabo.
Waxa degmada Donut ay ina siiso
Waxaan xakameynaa daloolka wax liqidda ee soo baxa marka walxo badan ay liqaan.
Ku dar walxaha gudaha si aad u hesho saameyn waali ah sida maraq samaynta, korinta bakaylaha, rashka kicinta
Sahami guryaha jilayaasha, mid walba meel gaar ah.
Waxyaalaha dib ugu celi godka si aad u xalliso xujooyinka ama aad u burburiso shay kasta.
Degmada Donut waxa laga heli karaa Mac App Store by wuxuu ahaa 12,99 €. Wuxuu u baahan yahay macOS 10.9.0 Mavericks waxaana loo turjumay Isbaanish. Magacani sidoo kale wuxuu diyaar u yahay PlayStation, PC iyo Nintendo Switch.
Haddii aad leedahay Mac leh processor-ka M1, Waxaa habboon in la iibsado nooca laga heli karo App Store, maadaama uu qiimihiisu yahay 4,99 Yuuro, wuxuuna ku habboon yahay aaladahaas iyo sidoo kale iPhone, iPad, iPod iyo Apple TV.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Donut County, ciyaar madadaalo u ah qoyska oo dhan